Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 15.0.1 | Vaovao IPhone
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 15.0.1 i Apple
Apple dia nijanona nanasonia ny famoahana ampahibemaso voalohany ny iOS 15 tamin'ny voalohan'ny volana oktobra. 20 andro aty aoriana, ilay orinasa miorina amin'ny Cupertino miala fotsiny amin'ny sonia ny iOS 15.0.1, izay midika fa ireo mpampiasa nanatsara ny fitaovany ho iOS 15.0.2 na iOS 15.1 dia tsy afaka mampihena ny iOS 15.0.1 intsony.
Navoaka tamin'ny mpampiasa ny iOS 15.0.1 tamin'ny 1 Oktobra mba hanamboarana bibikely izay misakana ny mpampiasa hamaha modely iPhone 13 mampiasa ny Apple Watch unlock function. Saingy tsy io irery no olana natrehin'ireo mpampiasa voalohany nanavao ny iOS 15.0.
Nametraka olana iray koa izay nahatonga ny fampiharana Setting mba hampiseho tsy diso izany feno ny fitahirizana fitaovana. Andro vitsy taty aoriana dia namoaka ny iOS 15.0.2 i Apple miaraka amina fanamboarana bibikely bebe kokoa aza.
Amin'izao fotoana izao, Apple dia nanandrana ny iOS 15.1 nandritra ny herinandro vitsivitsy, kinova izay ankehitriny dia amin'ny beta laharana faha-4, kinova izay hanampy ny fizarana SharePlay sy codec video ProRes ho an'ny mpampiasa iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max.
Navoaka tamin'ny 15.1 Oktobra ny iOS 25, miaraka amin'ny kinova farany an'ny macOS Monterey, na dia nanamafy aza i Apple tamin'ny voalohan'ny volana aogositra, Ny fampiasa SharePlay dia tsy ho hita raha tsy amin'ny fararano.
Toy izany koa no fiasa amin'ny Universal Control function, endri-javatra iray izay tsy ho hita koa amin'ny alàlan'ny fanombohana macOS Monterey.
Tsy azo apetraka intsony ny kinova taloha
Ny fiverenana amin'ny fananganana iOS taloha kokoa no vahaolana tokana ananan'ireo mpampiasa rehefa manavao izy ireo, manomboka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny terminal azy ireo. Raha ao anatin'ireto mpampiasa ireto ianao, ary tsy nanambatra anao tamin'izany fotoana izany, ny zavatra tokana azonao atao izao dia miandry ny famoahana ny iOS 15.1.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Mijanona amin'ny sonia ny iOS 15.0.1 i Apple
Ny lamba fanadiovana Apple dia malaza be! Fanaterana akaiky indrindra amin'ny Desambra
Podcast 13x08: New MacBook Pro, HomePod ary Airpods